Mushaharka Askariga AMISOM
Jumma Palli, 14 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Ciidan Somali Ah Oo Dhisan Lama Ogola. Mushaharka UN Siiso Askariga AMISOM Waa 1028 Doolar Bishii. Somaliya Dad Kale Ayaa Lagu Naas Nuujiyaa.
Wasiirka gaashaandhiga ee dalka Siira Liyoon Palo Conteh ayaa si cadho leh uga jawaabay laba cabasho oo kasoo kala yeedhay ciidamada Siira Liyoon ee Soomaaliya jooga iyo qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada ee ku sugan xarunta Siira Liyuun ee Freetown.
Askarta Siira Liyuun ee joogta Soomaaliya ayaa ku cawday inay ka mushahar yar yihiin ciidamada wadamada kale ka socda. Laakiin Wasiirka ayaa sheegay inuu ciidamada ka jaro 300 doolar oo ah cuntadoodii iyo hoygooda, isla markaana ay qaataan bil kasta 728 doolar. Mushaharka UN ay ugu tala gashay waa 1028 doolar bishii askari kasta, laakiin markaan ka jaro kharashkooda waan siinaa waxa u soo hadha ayuu yiri wasiirku.
Mar uu ka jawaabayey cabasho kale oo ka timi askarta Siira Liyuun ee aanay u suura gelin inay Amisom ka mid noqdaan taasoo ahayd in wasiirku laaluush ka qaato askarta si ugu daro ciidamada loo qaadayo Soomaaliya, ayuu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin. Ciidamada nala weydiistay waxay ahaayeen batalyan ee ma ahayn kumanaan, sidaa darteed waxaan ku soo xulay askarta akhlaaqdooda, iyo waaya aragnimadooda.Wuxuu qiray wasiirku in askari kastaa jecel yahay in Soomaaliya loo diro, laakiin taasi aanay suura gal ahayn.
Inay Afrikaanku u soo shaqa tageen Soomaaliya waxaa sii cadeeyey askari reer Burundi ah oo sheegay inuu guri ka dhistay Bujumbura, isla markaana jecel yahay in howshu sii socoto. Taliyaha ciidamada Kenya Julius Karangi ayaa isna sheegay in Soomaaliya ay ka joogaan 4,660 askari, sidaa darteed markii aan Amison ku biirnay waxaa naga dhacay culayskii na saarnaa, waxaana wax kasta naga bixisa UN ayuu yiri taliyuhu.
Labaatan kun oo ah askar Afrikaan ah ayaa bil walba qaata 1028 doolar askarigiiba, halka wiilasha iyo gabdhaha masaakiinta ah ee Soomaalida la siiyo 100 doolar bishii. Askarta Amison kama daahdo mana waayaan mushaharkooda halka Soomaalidu celcelis ahaan sugaan mushaharka sadex bilood. kharashka Amison ee ee bishii ayaa lagu qiyaasaa 40 milyan oo doolar. Madaxdii soo martay Soomaaliya midna kama hadal dulmigaa iyo kala sareynta xaga mushaharka.
Bazan ibn Sasan Bin Jacfar AlMakhzuumi